I-Toronto ukuya e-Argyle ziindaba ezimnandi zeSt. Vincent kunye neShishini lezoKhenketho laseGrenadines
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » I-Toronto ukuya e-Argyle ziindaba ezimnandi zeSt. Vincent kunye neShishini lezoKhenketho laseGrenadines
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • ISaint Vincent kunye neGrenadines Breaking News • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
I-St. Vincent kunye neGrenadines Tourism Authority (i-SVGTA) isamkele isigqibo se-Air Canada sokwandisa inkonzo kunye nokubonelela ngeenqwelomoya ezingapheliyo e-Air Canada Rouge ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya i-Pearson International Airport ukuya kwisikhululo senqwelomoya sase-Argyle.
Iiveki zeLwesine zeenqwelomoya ziyaqhubeka kwakhona ngo-Okthobha u-25, 2018, kwaye ziya kuqhubeka unyaka wonke. Ukuhamba ngenqwelomoya okwesibini ngeveki kuya kusebenza ngeCawa ngexesha lokuhamba ngexesha lasebusika eliphakathi, phakathi kukaDisemba 16, 2018 no-Epreli 28, 2019.
”I-Air Canada iyavuya ukunikezela ngenkonzo eyandisiweyo kunye nokujikeleza unyaka wonke eSt. Vincent naseGrenadines ukuqala kobusika. Isigqibo sethu sixhomekeke ekusebenzeni ngamandla kwale ndlela sayiqalisa kunyaka ophelileyo kwaye siyazingca ngokuba ngabaphethe izithuthi zokuqala eMntla Melika, ”utshilo uMark Galardo, uSekela Mongameli, uCwangciso lweNethiwekhi, iAir Canada.
Lo ngunyaka wesibini inqwelomoya inikezela ngeenqwelo moya ezingapheliyo ukusukela oko kwavulwa isikhululo seenqwelomoya iArgyle ngoFebruwari 2017, kunye nexesha lokuqala elinikezela unyaka wonke kubahambi baseCanada. Ezi nqwelo moya sele zikhona ngokuthengisa nge www.aircanada.com okanye ngokusebenzisa iarhente yokuhamba ekhethiweyo.
"Sonwabe kakhulu ukuba neqabane elaziwayo e-Air Canada Rouge yeenqwelomoya ezingapheliyo," utshilo uGlen Beache, umphathi we-SVGTA. "Ukuvula isikhululo seenqwelomoya i-Argyle International Airport kulo nyaka uphelileyo, kwaye ngoku sihambisa inqwelomoya ngeenxa zonke kunyaka ophelileyo ophuma eToronto okokuqala, sijonge phambili ekwamkeleni nangakumbi abantu baseKhanada abahamba eSt. Vincent naseGrenadines."
I-SVGTA iya kubamba uthotho lweeNdlela eziboniswayo kamva kule nyanga eCanada, ukubonelela ngolwazi oluthe kratya malunga neenqwelomoya kunye nemisebenzi yendawo esiya kuyo kunye neendawo zokuhlala. Imiboniso yendlela eCanada iya kuba ngumlenze wesithathu we "DiscoverSVG" iMiboniso yaseNdleleni eyenziwayo kweyona ndawo iphambili kwintengiso yemithombo yokhenketho.
Okwangoku igqiza elivela kwi-SVGTA elikhokelwe ngu-CEO weGunya u-Glen Beache ngoku use-United Kingdom kwi-Road Shows kuloo marike. Abathunywa bakwabandakanya uSihlalo weBhodi yabaLawuli uBianca Porter, amaGosa okuThengisa uNatasha Anderson noJamali Jack kunye nabameli abavela kwiihotele zalapha. Bajoyine uBarbara Mercury kunye noGracita Isilumkiso se-SVG London Tourist Office, kwimisitho enabasebenzi bezorhwebo kwezohambo eLondon, eBrighton naseBirmingham.
I-DiscoverSVG Road Shows iya kuqhubeka ukusuka nge-24 kaSeptembath ukuya kuSeptemba 28th eCanada apho iminyhadala izakubanjelwa eNiagara-on-the-Lake, Oakville, Kingston, Ottawa nase Montreal. Umlenze wase-USA we-Road Show uzakuqala nge-1 ka-Okthobhast ukuya ku-Okthobha 4th ngeziganeko eNew York, ePhiladelphia, eConnecticut naseBoston. I-SVGTA iyakwandisa iMiboniso yeNdlela kwiMarike yaseCaribbean ngenyanga kaNovemba, ekwabhiyozelwa kulo mmandla njengoKhenketho lweCaribbean M